Guddiga golaha shacabka ee ku hawlan xeerka doorashooyinka oo la shiray bulshada rayidka ah ee Puntland – Kalfadhi
Guddiga golaha shacabka ee ku hawlan xeerka doorashooyinka oo la shiray bulshada rayidka ah ee Puntland
Xildhibaanadda guddiga KMG ah ee golaha shacabku u xil-saareen diyaarinta xeerka doorashooyinka ayaa maanta la kulmay bulshada rayidka ah waxay sidoo kalena ka qayb-galeen munaasabad qado ah oo ay u sameeyeen guddoonka golaha wakiillada Puntland.
Kulanka qadada ah oo ka dhacay meel ka baxsan magaalada waxaa goobjoog ka ahaa xubnaha guddiga joogtada ah ee golaha wakiillada Puntland.
Guddiga KMG ah ee golaha shacabka ayaa dib u habaynta iyo diyaarinta xeerka doorashooyinka ayaa sidoo kale maanta waxay kulan la qaateen bulshada rayidka ah. Kulankaas ayaa bulshadu waxay guddiga u gudbiyeen afkaartooda ku aadan xeerkan.
Doodda ayaa xoogga saaraysay nooca doorasho qof iyo cod ah ee dalka ka dhici karta in lagu xadeeyo xeerka isla markaasna la saxo arrimaha siyaasadeed iyo farsamo ee lagu kala aragtida duwan yahay.
Guddiga ayaa kulamo gaar gaar ah la leh baarlamanka, bulshada rayidka ah iyo xukuumadda, waxaana qorshaha ku jirta in ay kulan guud la qaataan dhinacyada oo dhan, kaas oo qaybaha bulshada iyo dowladdu ay ku gudbinayaan araadooda.
Xildhibaan Fiqi “Madaxda Villa Soomaaliya lama shaqayn karo qof raba in mas’uuliyada saaran si wanaagsan u guto”
Xildhibaan Cilmi Maxamed Nuur oo ka hadlay muhiimada sharciga dhismaha guddiga la dagaalanka musuq maasuqa